Izitsha Eziyi-13 Eziphefumulelwe ZaseThai Zokunonga Isidlo Sakho - Ukudla
Izitsha Eziyi-13 Eziphefumulelwe ZaseThai Zokunonga Isidlo Sakho
13 Thai Inspired Side Dishes Spice Up Your Meal
Ukudla kwaseThailand kumayelana nokulinganisela — imvamisa kuba nobumnandi obuncane, usawoti omncane, ube muncu futhi ube muhle kancane. Futhi ngenkathi lokho kwenza ezinye izitsha eziphambili ezinambitheka kakhulu (i-pad Thai, unenhliziyo yethu ingunaphakade), futhi kusho ukuthi isitsha eseceleni esiphefumulelwe Thai singaba umphelelisi omuhle kakhulu wokungena okuyisisekelo. Nazi izintandokazi zethu eziyi-13.
OKUSHIWO: Ukupheka Okulula Oku-Thai Okuphefumulelwe Ongakwenza Ekhaya
Isithombe: Liz Andrew / Styling: Erin McDowell
Isaladi le-Thai elenziwe nge-Avocado
Zilungiselele ukuthandwa yi-Insta — le saladi yinhle futhi imnandi. Ngiyathanda ukuyihlanganisa nenkukhu elula eyosiwe yokudla okulula kwasehlobo.
izindlela zemvelo zokususa izinwele ebusweni
Isaladi eliqotshiwe le-Thai elinokugqoka i-Sesame Garlic
Uzofuna ukuletha lokhu kuwo wonke ama-cookout kanye ne-potluck onayo kuleli hlobo. Kepha qiniseka ukwenza okungeziwe; ipakisha ngokumangazayo ngezinsuku zasemini zokusebenza.
Isipinashi Esikhekhe Ngokhukhunathi
Ngubani odinga ubisi uma unobisi lukakhukhunathi (nojinja omningi, ugarlic nopelepele we-cayenne)?
amathiphu wobuhle basekhaya wesikhumba esikhanyayo
Ama-Nibbles anempilo namabhithi
Isaladi eluhlaza yePapaya
Iminti entsha nenqwaba yama-chilies abilayo kuyinkanyezi yalesi saladi esiphundu, okuyisitsha sohlangothi lukazwelonke lwaseThailand. (Ibhonasi: Le nguqulo nayo iyenzeka ibe yi-vegan.)
Ubhontshisi ohlaza okotshani weSaucy Stovetop
Sasidla noma yini uma ngabe yayishukunyiswa ngale sauce yamakinati. Kepha imvamisa, sinamathela eselulekweni selungu leCoterie uMonique Volz bese sihamba nobhontshisi obuluhlaza.
I-Street Smart Ikhishi
Isipinashi Samanzi Esithosiwe SaseThai
Ngubani odinga i-kale lapho ungadla isipinashi samanzi? (Futhi kwesinye isikhathi ibizwa nge-morning glory.) Lapha, inyakaziswa nge-oyster sauce, upelepele obomvu kanye nogalikhi omningi.
Isaladi ye-Butternut Squash Amaranth eyosiwe ene-Lemongrass Peanut Dressing
Siyayithanda indlela ilunga leCoterie u-Aida Mollenkamp ahlangana ngayo ngesikwashi esifudumele, nesinenhliziyo egqokisiwe nesigqoko se-lemongrass esine-tart kanye ne-tangy. Futhi, sizodla noma yini efaka ama-chips othosiwe othosiwe.
ukugqoka kanjani i-headwrap
Irayisi Ethosiwe Yophayinaphu waseThai
Irayisi elidala lisebenza kangcono kakhulu kulesi sidlo, ngakho-ke kuyindlela enhle yokusebenzisa ukudla okusele. (Uma uhamba nge-carb ephansi, irayisi ukholifulawa usebenza ngokuphelele, futhi.)
Ukudla kwakusihlwa e-Zoo
Isaladi lekhukhamba le-Thai
Sonke siphathelene nezitsha ezingenziwa ngaphambili, futhi le saladi ekhanyayo, eqabulayo empeleni kangcono ngemuva kokuthi ihlale efrijini usuku lonke. Sikubiza lokho ngokuwina.
Isaladi elibabayo le-Thai
Egcwele imifino futhi efakwe okokulutha okubabayo okusawolintshi, le saladi elula ingangezwa cishe kunoma yisiphi isidlo. (Ngiyabonga, ilungu leCoterie uGena Hamshaw.)
I-Thai Peanut Slaw
Ilungu leCoterie uPhoebe Lapine ligcina izinto ziphilile ngalesi sinhlawulo esingenawo uwoyela noshukela. Akukho nethonsi le-mayo elibonwayo (futhi asiliphutheli, noma).
Isaladi le-Thai Papaya eligcwele
Sasingazi nokuthi upopo kungenzeka vunguza, kepha shiyela kwilungu leCoterie u-Ali Maffucci ukuthi acabange ngaphandle kwebhokisi. Lokhu kuthatha isaladi yakudala kumnandi nje kancane kunohlobo olujwayelekile.
zokupheka Chinese ngezithombe
Ilayisi Elisheshayo Likakhukhunathi
Phonsa irayisi elinsundu nobisi lukakhukhunathi ku-Pot Instant ngenkathi ushisa i-wok yakho nge-stir-fry. Ngesikhathi sokudla kwakusihlwa, uzoba nelayisi elicijile nelinephunga elimnandi elinomqondo omncane nje wobumnandi.
OKUSHIWO: Ama-Recipes we-15 Wokudla Okuhlanzekile Wokuthambisa Ukwenza I-Dinner Tonight
amahhashi ezinwele ezisontekile
imikhiqizo yobuhle eyenziwe yasekhaya yesikhumba esikhanyayo
amakhambi asekhaya wokuqina kwezinwele
ungasusa kanjani izinwele ezengeziwe ebusweni
amanoveli ahlekisayo abantu abadala